विबाह चलिरहँदा १९ वर्षे विनिताको मण्डपमा नै मृ’त्यु, बेहुला भ’क्कानिएर रो’ए, देख्नेहरुका आँसु थामिएनन् – Online Nepal Site
कुन राशी भएका व्यक्तिले कुन पेषा अपनाउँदा भइन्छ मालामाल ?
घरमा माउसुली देखियो भने देखिने यस्ता संकेत जुन हामी सबैले बेवास्ता गरिरहेका छौ
आज राति यो समयमा मृगशिरा उल्कावर्षा हुने यसरि हेर्न सकिन्छ
मुख्य पृष्ठ /Intresting/विबाह चलिरहँदा १९ वर्षे विनिताको मण्डपमा नै मृ’त्यु, बेहुला भ’क्कानिएर रो’ए, देख्नेहरुका आँसु थामिएनन्
काठमाडौँ । मानिसको मृ’त्यु निश्चित छ । तर शुभकार्य गरिरहँदा कसैको मृ’त्यु भएका घ’टना संसारमा नै विरलै हुने गर्छन् । जसको साक्षी नै बनिन् भारतको उत्तर प्रदेशकी १९ वर्षीय विनिता । बेहुला सञ्जय शुक्रवार राति आफ्नो परिवारका साथ विनितालाई लिन पुगे तर उनले आफ्नी पत्निलाई घर लैजान भने पाएनन् । कारण विबाह चलिरहँदा नै विनिता मण्डपमा नै ल’डिन् । तत्कालै माइती र बेहुला पक्षले विनितालाई अस्पताल पुर्याएपनि अस्पतालले को’रोना परिक्षणको रिर्पोट ल्याउन भन्दै दुख दियो ।
विनिताकाको माइती पक्षले सक्दो कोशिस गरे पनि अस्पतालले भर्ना नगरेपछि उनको नि’धन भयो । नि’धनपछि बेहुला भ’क्कानिँदै रोए भने माइती पक्षमा स’न्नाटा नै छायो । कन्नौज प्रहरीले मृ’तकको श’व पोस्टमार्टमका लागि पठाएका छन् भने घ’टनाबारे अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । विनिताको नि’धनपछि गाउँ नै शो’कमा डु’बेको छ भने सबै स्त’ब्ध बनेका छन् ।
माता लक्ष्मीका प्रिय हुन्छन् यी महिनामा जन्मिएका महिला, तपाईको कुन महिना ?
लगातार काम बिग्रने र असफल हुने भएको छ ? यसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनुपर्दैन !
दाङमा एक्स-रे गर्दा यु’वतीलाई पुरै ना’ङ्गो ब’नाउन खोजेपछि